भगौडा कम्पनी सीएमसीसँग मेलम्चीको सिंगापुरमा वार्ता ! « GDP Nepal
भगौडा कम्पनी सीएमसीसँग मेलम्चीको सिंगापुरमा वार्ता !
Published On :6February, 2019 6:00 pm
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छाडेर भागको इटालियन ठेकेदार सीएमसीसँग आयोजना पक्षले सिंगापुरमा वार्ता गरिरहेको खानेपानी मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।
सीएमसीसँगको ठेक्का तोड्ने बताइरहेको सरकारले पुनः सोही कम्पनीमार्फत आयोजना अघि बढाउने उद्देश्यले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरु बीच वार्ता भईरहेको जनाएको छ ।
सिएमसी कम्पनीले राखेका केही मागहरुका विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ । मेलम्चीको काम छिटो भन्दा छिटो सक्न सकेसम्म यही ठेकेदार कम्पनीबाट काम गराउने नभए विकल्पका रुपमा अन्य कदम चाल्ने विषयमा खानेपानी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिहेको छ ।
ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग कुनै सहमति नभए सरकारले कानुनी व्यवधान नआउने गरी औपचारिक रुपमा ठेक्का सम्झौता तोड्ने जनाइएको छ ।